छोराछोरीको आकस्मिक कक्ष: आवश्यक के छ र जब लागू गर्न?
छोराछोरीको आघात केन्द्र एक चिकित्सा संस्था जसको मुख्य उद्देश्य 18 वर्ष मुनिका मान्छे मा निदान र विभिन्न घाइते को उपचार छ।
छोराछोरीको आकस्मिक कक्ष छ दुवै पर्याप्त ठूलो र एकल कोठा हुन सक्छ। यसलाई विभिन्न घाइते को बच्चाहरु को मामला मा सहयोग गर्न रूपमा चाँडै सकेसम्म क्रम लागि आवश्यक छ। यहाँ बच्चा विशेष घाउ आदिमा रोगाणु नाश गर्ने संग उनको व्यवहार र क्षतिग्रस्त स्थानमा पट्टी गर्न, घाउ सफा गर्न सक्नुहुन्छ। अक्सर यो एकदम पर्याप्त छ।
दुर्भाग्यवश, क्षति कहिलेकाहीं थप गम्भीर उपचार आवश्यक छ। छोराछोरीको आघात केन्द्र सुविधा बाहिर स्थित छ भने, त्यसपछि बच्चा एक विशेष अस्पताल पठाइएको गर्नुपर्छ। त्यहाँ उहाँले पूर्ण-fledged चिकित्सा सहायता प्रदान गरिनेछ थियो। आवश्यक छ भने, आघात सर्जन आवश्यक सर्जरी सञ्चालन हुनेछ। आधुनिक उपकरण धन्यवाद र यसको पुनर्जनन अनुपम एक तर्कसंगत दृष्टिकोण संग, बच्चाहरु को कुनै पनि नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न गर्दैन, बच्चाको शरीर दर।
यस मामला मा, एक बच्चाको आकस्मिक कक्ष मा स्वास्थ्य हेरविचार कामदार क्षति को जोखिम underestimates भने, र उचित उपचारको लागि अस्पताल गर्न बच्चा पठाउन छैन, त्यसपछि भविष्यमा बच्चालाई एक विशाल समस्या हुन सक्छ। तथ्यलाई हड्डी गर्न क्षति उनको वृद्धि भङ्ग छ भन्ने छ। केही अवस्थामा मा, भंग सँगै आफैलाई बढ्न, तर शायद यस्तो जडान शारीरिक छ। अन्य सबै अवस्थामा क्षतिग्रस्त हड्डी को वृद्धि वा भंग पूरै गलत निको पार्ने दर मा एक महत्वपूर्ण कमी छ। यो सबै एक एकदम बच्चाको शरीर सर्जरी र एक लामो पुनर्वास अवधिको लागि जटिल र दर्दनाक आवश्यक छ।
छोराछोरीको आकस्मिक कक्ष सामयिक पत्ता लगाउने, उपचार को लागि एक साँच्चै महत्त्वपूर्ण कार्य झूट र भनेर, यदि आवश्यक, विशेष अस्पताल युवा विरामीहरु स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।
जब म लागू गर्नुपर्छ?
तपाईं कुनै पनि चोट लागेको बच्चा लागि मद्दत माग्न सक्छौं। यो घडी वरिपरि छोराछोरीको आकस्मिक कक्ष भने मात्र यो सिधै अस्पताल संरचना मा राखिएको छ सम्झना गर्नुपर्छ। त्यसैले राति उत्पन्न दिन को चोट लागेको ठ्याक्कै त्यहाँ उपचार हुन अनिवार्य छ।
स्वाभाविक, एक स्क्राच वा चोट (हामी टाउको कुरा छैन भने) जस्ता घाइते संग, सहायता साइट मा प्रदान गरिनेछ। डाक्टर प्रकट भने, उदाहरणका लागि, एक भंग, तिनीहरूले एक सानो रोगी एक विशेष अस्पताल, जहाँ सबै घटनाहरू आयोजित हुनेछ पठाउनुहोस्। मुख्य भंग को संकेत यो हुनु हुँदैन ती ठाउँमा limb गतिशीलता को उपस्थिति छ।
यो आपतकालीन कोठा हो रूपमा अक्सर याद गर्नुपर्छ विद्यालयमा। छोराछोरीको क्लिनिक पनि तिनीहरूलाई छ। ताकि बच्चाहरु सबै छोराछोरीको आकस्मिक कक्ष मा चोट र उपचार पछि लगभग तुरुन्त पहिलो सहायता प्राप्त गर्ने मौका छ। प्रायजसो यो क्षति पनि गम्भीर थियो, विशेष गरी यदि एकदम पर्याप्त छ।
दोस्रो जन्म कसरी हुनेछ - उत्तेजना सामना र मद्दत enlists
खुट्टा मा बोझ कम गर्न कुहिनो समर्थन र उपकरणहरू अन्य प्रकार संग बैसाखी
व्यङ्ग्य थियेटर, मास्को: ठेगाना, मुग्ध पार्ने संगीतको, फोटो र समीक्षा
अष्ट्रेलिया धर्म: मिसनरीहरूको गतिविधिहरु को फलस्वरूप दोहरी विश्वास
पाइप मा ठाडो स्ट्रबेरी अवतरण। स्ट्रबेरी रोपण लागि पाइप कसरी बनाउने?
सेन्ट अलेक्जेन्डर: प्रतिमा, मन्दिर। दिन सेन्ट अलेक्जेन्डर को
फोटो र संरचना: Occipital हड्डी मानव वा पशु खोपडी छ
"Azalea हाउस" - कुत्ताघर Chihuahua प्रजनन
गर्छ paracetamol स्तन-रुचाउने मा contraindicated छ?
पुरानो रूसी राज्य पतन: इतिहास, कारण र परिणाम
प्राचीन बंदर, जसबाट एकजना मानिस आयो
ग्यास convector कसरी चयन गर्न